Mamorona tranobe toy ny LEGO miaraka amin'ny LeoCAD nohavaozina | Avy amin'ny Linux
Mamorona tranobe toy ny LEGO miaraka amin'ny LeoCAD nohavaozina
El famolavolana fanampiana amin'ny solosaina (CAD), dia mahazo tanjaka eo amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana, lasa ny andro izay tsy nisy afa-tsy ny safidy hafa nananana, amin'izao fotoana izao, misy maro be programa izay mampihatra ny CAD izay mifanaraka amin'ny Linux ary atolotray alalana maimaimpoana. Iray amin'izany LeoCAD rindrambaiko tena tsara izay mamela antsika mamorona fananganana karazana LEGO.
1 Inona ny LeoCAD?
2 Seho LeoCAD
3 Ahoana ny fametrahana LeoCAD
3.1 Ampidiro ao amin'ny Arch Linux sy Derivatives ny LeoCad
3.2 Ampidiro ao amin'ny Ubuntu sy ny Derivatives ny LeoCad
3.3 Ampidiro ny LeoCad amin'ny openSUSE sy ny Derivatives
3.4 Ampidiro ny LeoCad amin'ny Fedora sy ny Derivatives
4 Fehiny momba an'i LeoCad
Inona ny LeoCAD?
Izy io dia fitaovana maimaim-poana, novolavolain'i Leonardo Zide, izay mampiasa ny famolavolana fanampiana amin'ny solosaina (CAD) for mamorona fananganana LEGO, mora, haingana ary miaraka amin'ny famaranana matihanina.
Ny fitaovana dia manana fanohanana ny fenitra mifandraika amin'ny fanahafana ireo tranobe karazana LEGO ary ny fampiasana azy dia tsotra, indrindra indrindra dia ampy ny misintona sy mandatsaka ireo sombin-javatra avy eo mifototra sy milamina arakaraka ny tsiron'ny mpamolavola.
Tao anatin'izay andro vitsy lasa izay, ilay nanamboatra an'ity fitaovana mahavariana ity dia nanitsy ny bibikely marobe ary nanatsara ny fomba fiasa isan-karazany, ary koa ny fitomboan'ny isan'ny fampianarana ao amin'ny tranokala ofisialin'ny fampiharana, ka ho mora kokoa ny mianatra mampiasa azy io.
Ny namorona ny LeoCAD miantoka ny fanamboarana ny fitaovan'izy ireo ho an'ny maodely lehibe, manome ohatra maodelin'ny Tetezan'i Tower (Tower Bridge) izay sombiny 4.000 mahery no nampiasaina:
Toy izany koa, mamela antsika hamorona torolàlana momba ny fananganana ilay fitaovana, fitaovana tena tsara hampianarana ny fivorian'ny Lego fananganana:
Toy izany koa, afaka mankafy fomba fijery marobe momba ny fanamboaranay Lego isika, manafaingana ny fizotran'ny fananganana ary manome fanampiny ho fikarakarana ny pitsopitsony.
Azontsika atao koa ny manasongadina ireto toetra mampiavaka an'ity fitaovana ity:
Interface interface intuitive, miaraka amina fampiasa ho an'ny mpampiasa vao manomboka sy mandroso.
Tsipika fianarana fohy.
Safidy maro ho an'ny asan'ny sanganasa tsirairay (fihodinana, fandokoana, firafitra, ankoatry ny hafa).
Mifanaraka amin'ny LDraw, izay endrika fisie mahazatra amin'ny famoronana modely Lego.
Mamela ny fidirana amin'ny tranomboky LDraw izay manana singa Lego mihoatra ny 10000, izay havaozina tsy tapaka.
Manafatra sy manondrana rakitra LDR sy MPD, ahafahanao mizara ny tetikasanao amin'ny Internet mora foana na manitsy ireo izay nozarain'ny hafa.
Azo atao ny manonta ireo maodely amin'ny mpanonta 3D.
Ao amin'ny trano fitehirizan'ireo distros Linux lehibe io.
Izy io dia sehatra iray hafa (Linux, Windows ary OSX).
Loharano malalaka sy malalaka.
Ahoana ny fametrahana LeoCAD
Ny fametrahana ny LeoCAD dia tsotra fotsiny amin'ny ankamaroan'ny distros Linux, raha te hanao fametrahana tanana amin'ny fitaovana ianao dia tokony hanaraka ireto dingana manaraka ireto:
Apetraho ireo fiankinan-doha ilaina
GCC C ++ mpandrindra
Fonosana QT4 na QT5
Avy eo dia tsy maintsy mihazakazaka ireto baiko manaraka ireto ianao:
Ireo izay maniry hametraka amin'ny alàlan'ny fitantanana fonosana isaky ny distro dia afaka manaraka ireto fomba manaraka ireto raha ilaina:
Ampidiro ao amin'ny Arch Linux sy Derivatives ny LeoCad
Ampidiro ao amin'ny Ubuntu sy ny Derivatives ny LeoCad
Ampidiro ny LeoCad amin'ny openSUSE sy ny Derivatives
Azontsika atao ny mampiasa ny fonosana ofisialin'ny LeoCAD ho an'ny Opensuse
Ampidiro ny LeoCad amin'ny Fedora sy ny Derivatives
Fehiny momba an'i LeoCad
Ity fitaovana tsara indrindra ity izay mamela antsika mamorona fananganana karazana LEGO, Izy io dia manolo amin'ny fomba tena matihanina ireo fitaovam-pananana isan-karazany noforonina ho an'ny tanjona iray ihany, manasongadina ny fahafehezany avo lenta miaraka amin'ny fenitra maodely isan-karazany, ary ny fampiasana azy dia tsotra, saingy azo ovaina arakaraka ny fahaizan'ny mpampiasa tsirairay.
Ny fitaovana dia azo ampiasaina amin'ny endrika amateur na amin'ny tetik'asa matihanina kokoa. Zarao haingana ireo zavatra noforoninao ary ampiasao ireo forona avy amin'ny antoko fahatelo, amin'ny fomba mitovy amin'izany, aza manahy momba ireo tetikasa nataonao tamin'ny fitaovana hafa, mety mifanaraka amin'ny LeoCad ilay rakitra naondrana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Mamorona tranobe toy ny LEGO miaraka amin'ny LeoCAD nohavaozina
Tena mahaliana ity fitaovana ity, lahatsoratra tsara.
Jim whitehurst dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, andeha hojerentsika raha afaka mandao an'io AutoCAD ratsy io isika, indray mandeha, izay tsy afaka nianatra nampiasa ...
Valiny tamin'i Jim Whitehurst
Autocad 3d mbola tsy manana mpifaninana mendrika, fa amin'ny 2d dia draftsoght na briscad izy ireo.
Fomba famonoana mora foana ny fizotran'ny Linux amin'ny fkill-barotra